फिलिपको शताब्दी चुम्ने आशा अधुरै, ग्रीसमा जन्मिएका उनि वेलायतको राजकुमार कसरी भए ? - Meronews
फिलिपको शताब्दी चुम्ने आशा अधुरै, ग्रीसमा जन्मिएका उनि वेलायतको राजकुमार कसरी भए ?
मेरोन्यूज २०७७ चैत २७ गते २१:४१
एजेन्सी । बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाका श्रीमान् राजकुमार फिलीपको शुक्रबार निधन भएको छ । शोकको यस घडीमा विश्व समुदायले उनलाई लामो समय बेलायती राजपरिवारको वरिष्ठ सदस्यका रूपमा कुशल नेतृत्व गरेको छ ।
निधनपछि राजकुमार फिलिपलाई विश्व नेताहरूले बेलायत र विश्वका लागि उहाँको योगदानको स्मरण गरेका छन् । यसै क्रममा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले उहाँको ‘असाधारण जीवन र काम’ लाई स्मरण गरिएको छ ।
उनले भने छ,‘ड्यूक अफ एडिनबर्ग’ ले स्वदेश (कमनवेल्थ) तथा विदेशमा विभिन्न पुस्ताको माया पाएका छन् । उनले रोयल नेभी र बेलायतको इतिहाँसमा नै लामो समय दशकौँसम्म राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेकी महारानीका एलिजावेथ द्वितीयको पतिका रूपमा विश्वभरबाट माया पाएका छन् ।
यसैगरी राजकुमार फिलिपको निधनप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु, आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री मिखाएल मार्टिन, अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनलगायतका नेताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ट्वीटर, फेसबुकलगायतका समाजिक सञ्जालमा उहाँको योगदानलाई स्मरण गरिएको छ । यसरी उनलाई स्मरण गर्नेहरूमा बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति, यूरोपेली नेताहरूलगायत छन् ।
तर व्यक्तित्वको सोही सबल पक्षले उनलाई आफ्ना जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न सहयोग गर्यो। साथै आफ्नी पत्नीलाई रानीको कर्तव्य पूरा गर्न सम्पूर्ण सहयोग गरे ।
ग्रीसमा जन्मिएका फिलिप वेलायतको राजकुमार कसरी ?
महारानीका पतिको रूपमा उनलाई कुनै पनि संवैधानिक हैसियत प्राप्त थिएन । तर राजसंस्थाको नजिक उनिभन्दा धेरै अरू कोही थिएन । राजकुमार फिलिपको जन्म सन् १९२१ को जुन १० मा ग्रीसको कोर्फु द्वीपमा भएको थियो
दोस्रो विश्व युद्धको सँघारमा फिलिपले सैन्य सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । रोयल न्याभीमा जागिर थालेपछि त्यसैताका सन् १९३९ मा उहाँ र महारानी एलिजावेथ पहिलोपटक भेट भएको बताउने गरिन्छ ।
लन्डनस्थित वेस्टमिन्स्टर एबीमा सन् १९४७ नोभेम्बर २० का दिन उनिहरूको विवाह भएको थियो । यसलाई बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले युद्धपछिको कठिन समयमा बेलायतमा देखिएको एउटा रङ्गीन चमकको रूपमा उल्लेख गरेका थिए । सन् १९५२ को फेब्रुअरीमा फिलिप र एलिजाबेथ केन्या भ्रमणमा रहेको बेला बेलायतका राजा जोर्ज छैटौँको निधन भएको थियो । त्यसपछि बेलायतकी महारानी बनेकी आफ्नी पत्नी एलिजावेथलाई राजकुमार फिलिपको जीवनपर्यन्त दरिलो साथ रहेको थियो ।
राजकुमार फिलिपलाई विशेष रुचि युवाहरूको कल्याण तथा वन्यजन्तु र प्रकृति संरक्षणमा रहेको थियो । फिलिपलाई प्रतिबद्ध र आत्मनिर्भर व्यक्तिका रूपमा हेरिन्थ्यो ।
दशकौँसम्म महारानीको समर्थनमा तथा अन्य परोपकारी संस्थाका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भाग लिएका राजकुमार फिलिपले सन् २०१७ को अगस्टमा सार्वजनिक जीवनबाट अवकाश लिनुभएको थियो ।
बकिङ्घम प्यालेसका अनुसार सन् १९५२ देखि सार्वजनिक जीवनबाट अवकाश लिने समयसम्म उहाँले झन्डै २२ हजार त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
‘द ड्यूक अफ एडिनबरा’को उपाधिले चिनिने राजकुमार फिलिपलाई केही समय पहिले बेलायती अस्पतालमा भर्ना गरी गरिएको उपचारपछि स्वास्थ्यमा सुधार आएको भन्दै एक महिनापहिले उनको निवासमा लगिएको थियो । राजकुमार फिलिप र रानीका चार सन्तान, आठ नातिनातिनी र १० जना पनातिपनातिनीहरू छन् ।(रासस )